IBC 2019 တွင်ဖွင့်ခြင်း: တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးချဲ့ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမီမှုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုပြသမည့် Switch သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » IBC 2019 မှာပေါ် switching: အဆိုပါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများတိုးချဲ့ခင်းကျင်းပြမှ Switch များနှင့်တိုးမြှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမမီ
IBC 2019 မှာပေါ် switching: အဆိုပါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများတိုးချဲ့ခင်းကျင်းပြမှ Switch များနှင့်တိုးမြှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမမီ
နယူးယောက် - စက်တင်ဘာလ 9, 2019 - ခလုတ်, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂီယာများအတွက်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အမ်စတာဒမ်အတွက် IBC 2019 စက်တင်ဘာလ 13-17 မှာဥရောပနှင့်အာရှပစိဖိတ်ကိုဖြတ်ပြီးက၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့ဘယ်လိုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ , EI မျှော်စင်, ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်ကွန်ရက်ကအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူနှင့်အတူတစ်ဦးသဘောတူညီချက် streaming - လူသိရှင်ကြားပြပွဲ (ခန်းမ 5, A73) မှာသူ့ရဲ့ရပ်တည်ချက်အပေါ်သစ်ကိုတံဆိပ်ဝိသေသလက္ခဏာဖြန့်ချိသော Switch, ထို့အပြင်၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဥရောပမိတ်ဖက်မိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ် အီတလီနိုင်ငံန်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားအခွင့်အရေးများကိုကိုင်ဆောင်သူ။ အဆိုပါပူးပေါင်းရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြား key ကိုစျေးကွက်များတွင်တိုက်ရိုက် feeds တွေကိုဆည်းပူးကာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ရက်ကနေတဆင့်ဖြစ်ရပ်များ၏လွှမ်းခြုံဖြန့်ဝေဖို့ကုမ္ပဏီနှစ်ခု '' စွမ်းရည်ပိုကောင်းစေပါတယ်။
အဆိုပါ EI မျှော်စင်သဘောတူညီချက် MTI တယ်လီပို့ကိုလည်းဥရောပအတွက်၎င်း၏အနေအထားကိုကျားကန်ရည်ရွယ်ဂျာမဏီရဲ့ဦးဆောင်မီဒီယာကျောရိုးအော်ပရေတာနှင့်အတူအလားတူမိတ်ဖက်အတုလုပ်တဲ့ switch ရဲ့ဒေါက်ဖိနပ်အပေါ်လာသည်။ သူတို့ MTI မှတဆင့်ဂျာမနီရဲ့ဘွန်ဒစ်လီဂါနှင့်အတူပြုကြအဖြစ် - - EI မျှော်စင်က The Switch ရဲ့အမေရိကန်ဖောက်သည်များနှင့်အတူလက်တွဲမှတဆင့်ယခုအီတလီနိုင်ငံရဲ့စီးရီးအေ, တိုင်းပြည်၏ထိပ်တန်းဘောလုံး / ဘောလုံးလိဂ်အတွက် 24 အားကစားကွင်း၏မည်သည့်အနေဖြင့်ဂိမ်းကိုအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်အီတလီအခွင့်အရေးများကိုင်ဆောင်သူယခုလိမ့်မည်နေစဉ် NFL ဘောလုံးနှင့် NBA ဘတ်စကက်ဘောအပါအဝင်အဓိကမြောက်အမေရိကအားကစား၏တိုက်ရိုက်သတင်းပေးပို့ချက်များထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခြင်းရှိကြလော့။ အဆိုပါရွေ့လျားဥရောပ၌ Switch ရဲ့ပြီးသားခိုင်မာတဲ့ခြေရာကိုတိုးချဲ့ပြုလုပ်အတွက်လည်ပတ်နိုင်ငံများတွင်ယခုဗြိတိန်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, ဆွစ်ဇာလန်, သြစတြီးယားအဖြစ်အီတလီတို့ပါဝင်သည်ရှိရာ။ အဆိုပါပြောင်းလဲမည်လည်းတရုတ်နှင့်ဂျပန်သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်ကနေကျယ်ပြန့်ကွန်ရက်များနှင့်အတူတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အာရှပစိဖိတ်ရှိနေခြင်းရှိပါတယ်။
အဲရစ် Cooney က The Switch ၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်, မှတ်ချက်များ: "IBC over-the-ထိပ်ဆုံး (OTT) အော်ပရေတာ, အခွင့်အရေးကိုကိုင်ဆောင်သူနှင့်အခြားသူများတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များထုတ်လုပ်သူတို့သည်ငါတို့ထံမှအကြိုးပွုနိုငျဘယ်လိုထုတ်လွှင့်ပြသရန် Switch အဘို့ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း တိုက်ရိုက်လွှထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားလာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်လှမ်းမမီပြည့်စုံသောပူဇော်သက္ကာ။ မြေပြင်ပေါ်မှာငါတို့ရှိနေခြင်းသက်တမ်းတိုးရေးနှင့်ထိုကဲ့သို့သော EI မျှော်စင်နှင့် MTI တယ်လီပို့အဖြစ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဒေသခံခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. အားဖြင့်ဥရောပတိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးချဲ့ပြုလုပ်ရာအရပျတာနေရာတိုင်းမှာမဆိုအဓိကတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များ၏လွှမ်းခြုံများအတွက်ထောက်ခံမှုရာပူဇော်သက္ကာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းဗျူဟာမျဉ်းတား - ချောမွေ့စွာ, ထိထိရောက်ရောက်နှင့်ချိတ်ဆက်အားလုံးလိုအပ်သောထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများနှင့်အတူ။ "
အဆိုပါ Switch ရဲ့တဲမှဧည့်သည်များက၎င်း၏အသစ်သောအမှတ်တံဆိပ်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်:
ဘယ်လိုအဆိုပါ switch ဖြစ်ပါသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသဘာဝအဖြစ်အီလက်ထရောနစ်အားကစား၏လျင်မြန်စွာပေါ်ပေါက်လာမောင်းကူညီပေးနေ
ဘယ်လိုကုန်ထုတ်လုပ်မှုဘတ်ဂျက်ပူးတွဲတင်ပြထားစဉ်မှာ-နေအိမ် / ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ content များအတွက်မြင့်တက်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံများ၏စိန်ခေါ်မှုကိုဖို့အဖြေတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
အားကစား၏ကမ္ဘာအတွက်ထုတ်လွှင့်နှင့်လူ့အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူဦးဆောင်အဘယ်ကြောင့်အီလက်ထရောနစ်အားကစား, သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေးသူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာပေါ်ဖွင့်ရန် Switch ကိုရှေးခယျြ
ဒုတိယအကြိမ် IBC မှာပြသော Switch, ထို့အပြင်၎င်း၏မီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ် မှာ-မူလစာမျက်နှာအဆိုပါပြောင်းလဲမည်TM Burbank ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိတစ်ဦးအပိုဆောင်းမှာ-နေအိမ် / ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၏မကြာသေးမီပစ်လွှတ်ခြင်းဖြင့်တိုးချဲ့ဝန်ဆောင်မှု။ အားကစားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအီလက်ထရောနစ်အားကစားအဖြစ်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာဖြစ်ရပ်များအားဖြင့်အဓိကအားဖြင့်မောင်းနှင် - - မှာ-နေအိမ် / ဝေးလံခေါင်သီခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်တွေကိုတိုက်ရိုက် content များအတွက်အစည်းအဝေးမြင့်တက်ဝယ်လိုအားရည်ရွယ်သည်။ ၎င်း၏ရပ်တည်ချက်မှဧည့်သည်များချဲ့ထွင်မှာ-နေအိမ် / ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှု၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်ပလက်ဖောင်းများနှင့်အခြားအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်သူများ streaming ပိုမိုထုတ်လွှင့်အားဖွင့်သည်ကိုလေ့လာပါလိမ့်မယ်။ တိုးချဲ့အဆိုပါ မှာ-မူလစာမျက်နှာအဆိုပါပြောင်းလဲမည်TM ဝန်ဆောင်မှုပြီးသားကိုအောင်မြင်စွာ, CBS ကအားကစားရဲ့အကြိုက်အဘို့အ FOX, ESPN, Univision, MLS, NFL နှင့် TVG ကွန်ယက်ဝေးလံသောဖြစ်ရပ်များကိုအပ်လိုက်ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကကျနော်တို့စမတ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှုအားဖွင့်နေကြပုံကိုပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်း update လုပ်ဖို့ IBC 2019 မှာပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းရှိသည်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ဟုဂျော့ခ်ျလိုပက်ဇ်, Operations ၏ Switch ရဲ့အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌကပြောပါတယ်။ "တိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်လွှမ်းခြုံများအတွက်လျင်မြန်စွာတိုးတက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝယ်လိုအားအခွင့်အရေးများကိုင်ဆောင်သူအပေါ်ကြီးမားဖိအားပေးနေသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်သူတို့အားတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ဂီယာစီမံခန့်ခွဲရန်ဆန်းသစ်သော, ထိရောက်နည်းလမ်းများပေးခြင်းဖိအားကိုချွတ်ယူပြီးသူတို့အကောင်းဆုံးအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့သူတို့ကိုဖွင့်ကြသည်: အကြီးအကြောင်းအရာထုတ်လုပ် "။
MediaKind သည်လိုအပ်သည့် OTT နှင့် IPTV ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကိုလျင်မြန်စွာပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ရန် Aquila On-Demand ဖြေရှင်းချက်ကိုစတင်ခဲ့သည် - သြဂုတ်လ 5, 2020
De Tune သည်ပြည်သူပိုင်ကျောင်းကို Grass Valley ၏ Cloud Production Platform နှင့်အတူ Client Event များပြုလုပ်ရန်ကူညီသည် - ဇူလိုင်လ 29, 2020
Car App Store အတွက် ACCESS Twine ™သည် In-Vehicle Infotainment ကိုအလိုအလျောက်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြင့်စတင်အသုံးပြုခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 28, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor OTT လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-09
နောက်တစ်ခု: မြက်ချိုင့်စျေး GV ခြေလှမ်း Unscripted တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Tablet ကို-အခြေခံပြီး Automation-Assisted ထိန်းချုပ်ရေးကယ်ယူမှ